Duruufaha Abaareed Ee Ka Jira Gobolka Saraar Oo Aad Looga Dayriyey | Hangool News
Duruufaha Abaareed Ee Ka Jira Gobolka Saraar Oo Aad Looga Dayriyey
Saraar(Hangoolnews) Weriyeyaal ka socda wasaaradda warfaafinta Somaliland oo goboladda dalka ku maray socdaal ay ugu kuur-gelayaan baaxadda abaarta iyo xaaladaha nololeed ee dadka iyo duunyadda, iyadoo ay safarro ku marayaan goboladda galbeedka iyo bariga dalka.
Meelaha ay weriyeyaashu soo mareen waxaa ka mid ah banka loo yaqaano Saraar oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo, isla markaana degaan ahaan ka tirsan gobolka Sanaag, degmadda War-idaad iyo meelo kale. Waxaanay kooxdan weriyeyaasha ah meelaha ay soo mareen ka diyaariyeen warbixino ay ku qiimaynayaan sida ay wakhtigan tahay xaaladda degaamadaasi iyo is-bedelka ku yimid abaarta darteed meelihii dhul-daaqsimeedka ahaa ee lagu yaqaanay midabka gacaaran.
Markii ay marayeen degmadda War-idaad oo ka tirsan gobolka Saraar, waxay weriyeyaashu kula kulmeen guddoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Maxamed, oo isaga laf ahaantiisu xiligaasi ku guddo jiray kormeer uu ku marayay qaar ka mid ah degaamadda hoos yimaadda gobolka Saraar gaar ahaana dhinaca woqooyiga.
photo File abaaro daran
Badhasaabka ku xigeenka gobolka Saraar ayaa weriyeyaasha uga waramay waxyaabihii uu ku soo arkay meelihii uu soo maray. Waxaanu yidhi “Kormeer ayaan u soo baxay, kaasi oo aan ku eegayay abaartu heerka ay gaadhsiisan tahay iyo baahidda dadka haysa iyo biyo la’aanta jirta in aan xog-ogaal u noqdo. Qaybo ka mid ah degaamadda gobolka maan wada gaadhin, laakiin intii aan soo maray iyo inta kale ee aan xogtoodda hayaba, waxaa ugu daran dhinacan woqooyiga aanu roobku labadii sanadood ee u danbeeyay ka di’in, iyadoo ay dadkii uga hayaameen dhinaca hawdka, muddo lix bilood ah ayaanay dadkii ka maqan yihiin, lixdaa bilood ee laga maqnaa tuulooyin ilaa sodon gaadhaya oo saddex degmo ka kooban, oo kala ah War-idaad, Ceelal iyo Dhanaanno inta u dhaxaysa waa laga tegay, waxaana ku hadhay dadkii xamasta ahaa iyo waayeelkii. Waxaa gobolka Saraar maanta ka taagan baahi cunto oo aad u daran, dadkii reer baadiyaha ahaana way liitaan.”
Sidoo kale maayarka degmadda War-idaad ayaa weriyeyaasha uga warbixiyay heerka abaarta iyo halka ay marayso xaaladda nololeed ee bulshadda degaamadaasi. “Degmadani waxaa ka taagan xaalad abaareed, taasoo dalka intiisa kaleba saamaysay, degmadan iyo degaamadda ku dhaw-dhawna ay la qabto, tuulooyinkana waa laga hayaamay. Waxaana ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran, biyo la’aanta ayaana mudooyinkan danbe aad u soo badanaysa. Waxa kale oo ka mid ah duruufaha jira xaaluf ba’an kaasi oo keenay in ay xooluhu wax ay cunaanba waayaan” ayuu yidhi maayarka degmadda War-idaad.
Dhinaca kale waxay weriyeyaashu kormeerkaasi ku soo mareen tuuladda Gadhka, waxaanay xaaladda abaarta eek a taagan halkaasi ka waraysteen qaar ka mid ah odayaasha iyo bulshadda kale ee ku dhaqan tuuladaasi.Waxaanay dadka tuuladda Gadhka sheegeen in ay xaaladda abaarta u dheer tahay xoolaha iyo dadka degaankaasi xanuuno aanay garanaynin ay haysta, isla markaana ay jiraan dad badan oo u jiifa xanuunkaasi.